Umncintiswano we-Pwn2Own uphumelele i-100.000 yeedola yokugenca i-Safari | Ndisuka mac
Kwiithelevishini zelizwe lethu siziqhelanise nokubona olona khuphiswano lungaqhelekanga nolwahlukileyo. Kude kwi "1,2,3 phendula kwakhona" kunye "noburharha obumthubi" baseJapan, namhlanje siyazonwabisa ngokubukela i-blockbusters yabantu abadumileyo kwiziqithi ezizimeleyo, okanye izinto ezinjalo.
Kukho ukhuphiswano lonyaka oluhlala lungaqapheleki kuthi, kodwa lulandelayo olukhulu kwihlabathi liphela. I malunga "Pwn2Yenziwe«, Apho abaduni abadumileyo babekwa kuvavanyo ngokubenza ukuba" baphile "kwiinkqubo ezahlukeneyo zihlala. Omnye wabo ufumene i-nip elungileyo ngokuqhekeza ukuxhaphaza kweSafari.
Qho ngonyaka, iphulo i-Zero Day Initiative liququzelela ukhuphiswano lokuqhekeza olubizwa ngokuba yi "Pwn2Own" apho abaphandi bezokhuseleko banokufumana imali xa befumana ukuba sesichengeni kakhulu bahlala kumaqonga aphambili anje ngala IWindows kunye neMacOS.
Lo msitho ubonakalayo "Pwn2Own 2021" uqalwe ekuqaleni kwale veki kwaye waboniswa I-23 iinzame zokuqhekeza Yahlulwe kwiimveliso ezili-10 ezahlukeneyo, kubandakanya izikhangeli zewebhu, ubuchule, iiseva, nokunye okuninzi. Ukhuphiswano oluhlala iiyure ezininzi ngosuku iintsuku ezintathu zilandelelana, sasaza ngqo kwiYouTube.
Iinkqubo zika-Apple azange zihlaselwe ngamandla kolu hlelo lomncintiswano, kodwa kusuku lokuqala, Imihla kaJack Iinkqubo zeRET2 zibaleke ukuxhaphaza iSafari "ukuya kwi-kernel zero-day" kwaye yaphumelela IRandi ye100.000. Sebenzisa ukugcwala kwenani elipheleleyo eSafari kunye nesikripthi se-OOB ukufumana ikhowudi kwinqanaba lenkozo, njengoko kungqinisisiwe weposi yombutho.
Ndiyakuvuyela uJack! Ukufumana i-1-cofa iApple Safari kwi-Kernel Zero-day e # Pwn2Own 2021 endaweni yeRET2: https://t.co/cfbwT1IdAt pic.twitter.com/etE4MFmtqs
Iinkqubo zeRET2 (@ i-ret2systems) Aprili 6, 2021
Abazange batyhalele iSafari kuphela
Olunye uvavanyo lokugenca ngexesha lomsitho we "Pwn2Own" ojolise kuTshintshiselwano lweMicrosoft, ukufana, Windows 10, Amaqela eMicrosoft, Ubuntu, Oracle VirtualBox, Zoom, Google Chrome, kunye neMicrosoft Edge, ukufumana ubutyebi obuninzi okanye obuncinci.
Umzekelo, abaphandi abangamaDatshi uDaan Keuper kunye noThijs Alkemade, babonakalise ukungalunganga kwezokhuseleko Zoom. I-duo ixhaphaze i-trio yeziphene ukufumana ulawulo olupheleleyo lwe-PC ekujolise kuyo usebenzisa i-Zoom app ngaphandle kokunxibelelana nomsebenzisi.
Pwn2Own abagqatswa abafumene ngaphezulu 1,2 iidola ezigidi kwimivuzo yeempazamo abazifumeneyo. I-Pwn2Own inika abathengisi abanjengeentsuku ezingama-90 ze-Apple ukuba bavelise ukulungiswa kobungozi obufunyenweyo, ke sinokulindela ukuba ibug ibhekiswe kuhlaziyo oluzayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Pwn2Own 2021 okhuphisana nayo iphumelele i-100.000 yeedola yokugenca iSafari